Argaggaxqabka | Suomen Mielenterveysseura
Qofka la ildaran argaggaxqabka wuxuu leeyahay qabasho xooggan oo argaggax ah soona noqnoqda. Astaamaha qabashada waxay yihiin wadne garaac lama filaan ah, dareen mergasho ah, laab xanuun iyo wareer. Qabashadaas waxay la xidhiidhaa dareen ah nolol sirgacan iyo cabsi xoogan oo geeri ah ama cabsi waalasho. Inta aan la ogaan argaggaxqabka, calaamadihiisa waxa si fudud loogu khaldi karaa tusaale ahaan kuwa wadna xanuunka.
Qabashada argaggaxu waa kuwo cabsi darran leh iyo weliba soo noqnoqashada la qabsashadu waxay keeni kartaa xaalad dareen kurbo leh oo joogto ah. Qofka leh argaggaxqabka wuxuu iska ilaaliyaa meelaha cidhiidhiga ah iyo meelaha dadku ku badan yahay ama xaaladaha hadda ka hor lagu qabtay.
Argagax qabka waxaa jira habab daryeel oo waxtar u leh
Dadka leh argaggaxqabka waxa faa’iido ugu jirtaa daaweynta iyo teraabiyada cilminafsiga. Daryeelka habboon ee argaggaxqabku wuxuu keeni karaa ka bogsasho wanaagsan, laakiin haddii daryeelku yahay mid muddo gaaban qaata, waa suurtogal in xanuunku dib usoo cusboonaado.